Indlu yefama yaseCaversham Woods 1 eMidlands eKZN
Indlu entle yasefama ineembono ezintle ngaphaya kweengca eziqengqelekayo zijonge phezu kwamadlelo amahashe ezantsi kumlambo ongxolayo. Isandi somlambo esinokuvakala kuzo zonke iindawo ze-cottage yinto yonyango. Kukho indawo eninzi yokubaleka egadini kunye nejimu yasehlathini yabantwana. Kwicala lasempuma lefama kukho iibhayisekile ezinkulu kunye neendlela zokuhamba. Kukho amadama ama-2 amancinci e-bass kwaye ungaloba emlanjeni.
Le ndlwana yasefama inepatio enkulu egqunyiweyo enendawo yokuphumla kunye neendawo zokutyela, indawo entle yokwenza ibraai. Ngaphakathi kukho indawo yebha kunye nefriji yebha, ilungele ukonwabisa. Ngeengokuhlwa ezibandayo ungabambana ukuya kwindawo evulekileyo yomlilo kwiisofa ezitofotofo. Ikhitshi ifakwe ngokupheleleyo. Ukwanalo nokhetho lokutya ngaphakathi kwitafile enkulu yokutyela. Iibhedi ziibhedi ezitofo-tofo ezinomqhaphu ococekileyo welinen. Ngesandi somlambo oku kwenza ubuthongo obuzolileyo. Indawo entle ukonwabela ubomi basefama ngokugqibeleleyo, kusapho lonke.
Sikufutshane neendawo zokutyela ezininzi ezaziwa kakuhle njengeLa Lampara eyona ndawo ithandwayo yokutyela yase-Italiya esekwe kweyona ndawo intle yasefama yelizwe. Kukho indawo yokutyela yaseCaversham Mill ebekwe ecaleni kwendlela yokuwa kwamanzi.
Ungabhukisha ukuya kwi-white river rafting ukusuka kwindawo yokutyela yaseCaversham.
I-Piggly wiggly yimizuzu emi-5 ukusuka kuthi kwaye ingumtsalane omkhulu wabantwana abancinci kwaye ineevenkile ezininzi ezinomdla ukusuka kwizinto zokuhombisa ukuya kwivenkile yewayini. Bakwanayo nePizza yokutyela enkulu kwaye ivenkile yekofu ibonelela ngokutya okumnandi.
Ezantsi kwendlela sinegalari edumileyo yeArdmore Ceramic kunye ne studio. Eyona nto ifanelekileyo ukuyijonga. Iiseramics zithunyelwa kulo lonke ihlabathi. Banegalari apho ungathenga khona izinto kwaye ube nevenkile yekofu. Ifama iyodwa intle kakhulu. Kunconywa kakhulu ukutyelela kodwa akulunganga ukuthatha abantwana abancinci kwigalari ngenxa yazo zonke izinto ezinqabileyo eziphezulu.
Itshizi yomhlaba waseSwitzerland luhambo olukhulu losapho. Abantwana bafumana ukutya iibhokhwe zaseSwitzerland kunye neepikiniki ziyafumaneka kwi-deli.
Zininzi iindawo zomtshato ezikufutshane. Enye yezona zikufutshane yi "The Groves" inomlambo ongaphambili kunye nekhaya elihle elinendawo yokuhlala eyongezelelweyo. Amabala kunye namabhoma ayaphupha okwenza ukuba ibe yindawo efanelekileyo yokutshata.
Ekufikeni kwethu siya kuvula isango lefama, nokuba ngumsebenzi okanye mna ndiya kukujonga kwaye ndikuqhubele kulo lonke ulwazi malunga nendlwana kunye neendawo eziyingqongileyo. Abasebenzi bam baya kunceda ekukhupheni isithuthi sakho baze bakuhlalise. Ngenye indlela ukuba unqwenela ukuba ungadibanisi nomntu ngenxa yezizathu ze-COVID kukho ukhetho lokukhangela izitshixo kwibhokisi yokutshixa kumnyango wangaphambili. Ifolda enalo lonke ulwazi lwe-cottage iya kuba kwindawo yokuphumla. Iindwendwe zamkelekile ukuba ziqhagamshelane nam okanye umamkeli ngelo xesha ukuba banazo naziphi na iingxaki okanye imibuzo.
Ekufikeni kwethu siya kuvula isango lefama, nokuba ngumsebenzi okanye mna ndiya kukujonga kwaye ndikuqhubele kulo lonke ulwazi malunga nendlwana kunye neendawo eziyingqongileyo. Ab…